Nomad naBelkin Kutanga Kutanga Zvishandiso zveAirTags | IPhone nhau
Pamwe nekutangwa kweAirTags, Apple yakatanga ruzhinji rwe zvishongedzo zveiyi locator bhakoni, huwandu hwezvishongedzo zvinowanikwa mune yakawanda nhamba yemavara uye ekupedzisa uye kwatinofanira kuwedzera iwo akasarudzika ari pasi pechiratidzo cheHermès chine mhando yakachipa inotangira pa299 euros uye inodhura inosvika ma449 euros.
Kana iwe watove wakachengeta yako AirTags asi hapana imwe yesarudzo dzinopihwa naApple sangana nezvido zvako kana kugutsa zvaunofarira, Unogona kusarudza imwe yemhando dzakasiyana idzo dzakatangwa nevakomana kubva kuna Nomad naBelkin pamusika.
Chishongedzo chakachipa pane isu chatinogona kuwana parizvino pamusika kubva kune anozivikanwa mugadziri chinopihwa naBelkin, neMudziviriri aine tambo. Izvi zvinowanika mumavara chena, nhema, pingi uye bhuruu, Iyo ine mutengo we13,95 euros uye yave kuwanikwa muApple Chitoro Pamhepo.
Ichi chishongedzo chinodzivirira kumucheto kweAirTag kubva mukukwaya kuwedzera kune rambe rakabatanidzwa zvakasimba pasina kuviga dhizaini yako kana zvinyorwa zvatinga sanganisira. Izvo zvakanaka kuisa musutukesi, bhegi kana chero chimwe chinhu chatisingade kurasikirwa nacho.
MunaNdira apfuura, kuvandudzwa kwezvinhu zviviri zvitsva kubva kuNomad firm yeAirTags kwakaburitswa, zvishongedzo izvo atove kuwanikwa kuchengetera kubudikidza ne Nomad webhusaiti uye kutumira kwake hakuna kurongerwa munaJune naJuly.
Kune rimwe divi, tinowana iyo Leather Loop, Horingi yeganda kiyi mhete inosanganisira kiyi mhete. Mutengo weiyi keychain i24,95 euros, asi kana tikachengetera izvozvi, mutengo wekupedzisira unogara pamadhora e19,95 nekutakura mumwedzi waJune.
Pamusoro peiyo Leather Loop, inotipawo iyo iyo Chikopa Keychain, rin'i yakakosha iyo inokutendera iwe kuti uvanze iro renzvimbo renzvimbo yematombo mukati uye iwo mutengo wayo uri wekusimudzira mutengo we $ 29,95 nekutumira muna Chikunguru.
Pamusoro pemakiyi, ivo vakomana veNomad vakafunga nezve vese vashandisi avo kurasikirwa nemagirazi ezuva kana kuona kwemaziso nguva dzose .
Mutengo weGirazi reGirazi ndeye $ 29,95 mukusimudzira uye kutumira kwayo hakutarisirwe kusvika muna Chikunguru 20.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nomad naBelkin Vhura Chekutanga Chishandiso cheAirTags
Apple yanga ichigadzirira AirTags kweanopfuura makore maviri